Mpirakidraharaha – Fitsarana Anosy: nnarivony isan’andro ireo antontan-taratasy kirakiraina | NewsMada
Mahatratra anarivony isan’andro ireo antontan-taratasy kirakirain’ny mpirakidraharaha eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany eny amin’ny lapan’ny Fitsarana Anosy. Isan’izany ny casiers judiciaires miampy ireo antontan-taratasy maro samihafa.
“Antontan-taratasy hatrany amin’ny 2 000 raha kely indrindra no enjehina atao sonia isan’andro ary tsy miala eo raha tsy vita izany. Mbola mihoatra noho izany aza ny antontan-taratasy atao sonia rehefa fotoanan’ny fanadinam-panjakana satria marobe ireo mangataka casier judiciaire eny amin’ny fitsarana”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny mpirakidraharaha eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy, Herinatrehina Inham Ella.
Nisy, araka izany, ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo mpirakidraharaha vaovao miisa 98 teny amin’ny CCI Ivato, omaly. Andiany faha-17 mitondra ny anarana hoe “Ny Avo” ireto navoaka ireto rehefa nahavita ny fiofanana tao amin’ny sekoly ambony fanofanana mpitsara sy mpirakidraharaha eny Tsaralalana. Hanampy ireo mpirakidraharaha efa am-perinasa ka haparitaka manerana ny Nosy izy ireo.
“Milina mampihodina ny fitsarana ny mpirakidraharaha satria tsy mandeha ny raharam-pitsarana raha tsy eo ny mpirakidraharaha. Mahatratra eo amin’ny 1 300 amin’izao ny isan’ireo mpirakidraharaha”, hoy hatrany ny lehiben’ny mpirakidraharaha.